Robotka Rinjiyeynta Shiinaha HY1050A-200 Soo-saare iyo Badeecad | Yunhua
Waxaan bixinaa robot warshadeed oo si otomaatig ah u buufin kara ranjiga ama u buufin kara rinjiga kale. Marka si fiican loo qorsheeyo, robot rinji warshadeed ayaa codsan kara alaab iyada oo aan looga tagin dhibco, iswaafaqla'aan, isweydaarsi, iwm. Aaladaha wax lagu farsameeyo ee warshadaha ayaa bixin kara marin gaar ah oo qayb ah. Kaliya maahan inay yihiin qalab gacmeedyo jilicsan oo fog, laakiin aalado ayaa lagu rakibi karaa dhowr meelood oo kala duwan (derbi, shelf, tareen) oo u oggolaanaya xitaa dabacsanaan weyn.
Rikoodhada rinjiyeynta ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa waaxaha wax soo saarka farsamada sida baabuurta, aaladaha, qalabka korontada, iyo dhaldhalaalka. Rinjiyeynta 'Robotic' iyo daahanku waxay bixiyaan faa'iidooyin kala duwan,
oo ay ka mid yihiin:
1. Nabadgelyada la hagaajiyay ee bay'ada shaqada ee rinjiyeynta khatarta ah
Codsiga rinjiga robotka ee iswaafaqsan wuxuu si weyn u yareeyaa qashinka maaddada
3.Hawlaha waxsoosaarka iyo wax soo saarkooda
4.Fudud in lagu shaqeeyo lana ilaaliyo
Q1. qaabkee ayaa loo isticmaali karaa ranjiyeynta?
A. Lixdeenna dhudhun iyo 4 aaladaha aaladda loo yaqaan 'robot axis' waxaa loo isticmaali karaa rinjiyeynta, Sida HY1020A-168, HY1010A-143, iwm.
Q2. Marka la barbardhigo astaanta caanka ah, Maxaan u doortaa robot YOO HEART?
A. Marka hore, Robotkeena rinjiyeynta waxaa loo adeegsadaa dalab aan lahayn shuruudaha ka hortagga qarxa. ka dibna warshadyadan yaryar iyo kuwa dhexe ee aan awoodin inay lacag badan ku helaan qalabaynta aaladda robotka.
Kadib, waxaan haynaa codsi badan oo dhab ah oo ku saabsan rinjiyeynta oo aan ka helno qiimeyn wanaagsan macaamiisha, Khibradahan wanaagsan waxay naga caawinayaan inaan siino xalal wanaagsan oo rinjiyeynta ah.
Maxaad noo dooran weyday haddaan siin karno xal wanaagsan iyo qiimo wanaagsan?
Q3aad. Ka waran tababarka?
A. Tababar, waxaad u imaan kartaa warshaddeena tababar qoto dheer. Haddii aad u baahato ninkeena warshadahaaga tababarka, dhammaan khidmadaha adiga ayaa lagaa qaadi doonaa. Dabcan, waxaan ku siin karnaa xoogaa taageero fog ah, si aad u ogaato xoogaa adeegsiga aasaasiga ah ee robotka.
Q4. Miyaan noqon karaa wada-hawlgalayaal keli ah qaybta ranjiyeynta?
A. Hubaal, haddii aad kaliya ku wareegeyso inaad ganacsi ku leedahay rinjiyeynta aaladda, waan ka hadli karnaa tan.
Q5. haddii aan haysto arji rinjiyeyn ah, sideen ku bilaabi karaa?
A. waxaad marka hore ii sheegi kartaa sida saxda ah ee aad u baahan tahay? Hadday xal dhammaystiran u tahay rinjiyeynta iyo xoqidda ama kaliya aan u baahanahay na soo siiso robot + mashiinka rinjiyeynta + toosh rinjiyeynta. Farsamayaqaankeenu wuxuu ku siin doonaa talooyin ku saabsan mashruucaaga.
Hore: Mashiinka 'Palletizing robot' HY1010A-143
Xiga: Rinjiyeynta rinjiga HY1010A-143